Kuchengetedza Kwevanhu Zvigadzirwa Vagadziri & Vatengesi - China Yekuchengeta Yega Ingredients Fekitori
DL-Panthenol inoyevedza humectants, ine chena upfu fomu, yakanyungudika mumvura, doro, propylene glycol.DL-Panthenol inozivikanwawo seProvitamin B5, iyo inoita chinzvimbo chakakosha muvanhu vepakati metabolism. Kushomeka kweVitamin B5 kunogona kukonzera. akawanda dermatological kusagadzikana.DL-Panthenol inoiswa mune angangoita ese marudzi ekushambadzira kugadzirira.DL-Panthenol ine hanya nevhudzi, ganda nezvipikiri. Muganda, DL-Panthenol inzvimbo yakadzika yekupinza humectants. DL-Panthenol inogona kukurudzira kukura kweepithelium uye ine an ...
DL-Panthenol 50% chinhu chikuru humectants, iri isina ruvara kune yakacheneruka yero viscous mvura, yakanyunguduka mumvura, doro, propylene glycol. DL-Panthenol inozivikanwawo seProvitamin B5, iyo inoita chinzvimbo chakakosha muvanhu vepakati metabolism. yeVitamin B5 inogona kukonzeresa mazhinji dermatological kusagadzikana.DL-Panthenol inoiswa mune angangoita ese marudzi ekushambadzira kugadzirira.DL-Panthenol inotarisira bvudzi, ganda nezvipikiri.Muganda, DL-Panthenol inodzika inopinza humectants.DL-Panthenol inogona kukurudzira. the gro ...
DL-Panthenol 75% inoyevedza kwazvo, haina kuchena kune yakacheneruka yero viscous fluid, yakanyungudika mumvura, doro, propylene glycol. DL-Panthenol inozivikanwawo seProvitamin B5, inoita chinzvimbo chakakosha muhumiriri hwevanhu hwekupindirana. yeVitamin B5 inogona kukonzeresa mazhinji dermatological kusagadzikana.DL-Panthenol inoiswa mune angangoita ese marudzi ekushambadzira kugadzirira.DL-Panthenol inotarisira bvudzi, ganda nezvipikiri.Muganda, DL-Panthenol inodzika inopinza humectants.DL-Panthenol inogona kukurudzira. the gro ...
D-Panthenol is a viscous liquid derivative of pantothenic acid uye yakanyatsogadzirirwa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Inonyungudika kwazvo mumvura, inonyungudika nyore mudoro, inogadziriswa mune glycerol, yakanyungudika zvishoma muether, isina kusanganiswa mumafuta emiriwo, mamineral emafuta uye mafuta. Makiyi ehunyanzvi Maparamende: Kuzivikanwa A Inoenderana neUSP Chitupa B Inoenderana neUSP Chitupa C Inoenderana neUSP Chitarisiko chisina Rakajeka, Viscous uye yakajeka mvura Assay (Anhydrous base) 98.0% ~ 102.0% Speci ...
D-Panthenol 75% is a viscous liquid derivative of pantothenic acid uye yakanyatsogadzirwa kuti ishandiswe mumusoro. Inonyungudika kwazvo mumvura, nyore nyore kusanganiswa nedoro, kusungunuka mu glycerol, kusungunuka zvishoma muether, kusungunuka mumafuta emiriwo, zvicherwa zvemafuta uye mafuta . Makiyi ehunyanzvi Maparamende: Chitarisiko Chisina Ruvara, Chitarisiko uye chakajeka chemvura Mvumo Positive reaction Assay (HPLC) 75.0 ~ 78.5% Mvura (Karl Fischer) Isingapfuuri 0.1% Yakanangana neOptical Rotation + 29 ° ~ + 31.5 ° Am ...
D-Calcium Pantothenate ndiyo calcium munyu wevhitamini B5 inonaya mvura, inowanikwa munzvimbo dzinomera uye mhuka dzemhuka dzine antioxidant pfuma. Pentothenate chikamu cheCoenzyme A uye chikamu cheVitamin B2 yakaoma Vitamin B5 chinhu chekukura uye chakakosha pamabasa akasiyana siyana emagetsi, kusanganisira metabolism yemakabohydrate, mapuroteni, uye mafuta acids. Vitamin iyi inobatanidzwawo mukutanga kwecholesterol lipids, maurotransmitter, mahormone eSteroid, uye hemoglo ...
Ascorbyl Tetraisopalmitate, inonziwo Tetrahexyldecy Ascorbate, iri morekuru rakatorwa muvhitamini C uye isopalmitic acid. Mhedzisiro yechigadzirwa yakafanana neiyo vhitamini C, inonyanya kukosha kuti inokwanisa kuita se antioxidant. Ascorbyl Tetraisopalmitate inoderedza kugadzirwa kwea oxidizing vamiririri, izvo zvinokonzeresa kukuvara kwemasero mushure mekuratidzwa kuUV kana njodzi dzemakemikari. Uye, ganda rinotaridzika kukumbira ...
Biotin inonziwo D-Biotin, Vitamin H, Vitamin B7, iyo chena kana ingangoita chena, kristiniine poda kana makristara asina ruvara, akanyungudika zvishoma mumvura, doro, isingagadzirisike muacetone. Makiyi ehunyanzvi Maparamende Chitarisiko Chena kana chisina kuchena-poda Kuzivikanwa (A, B, C) Inoenderana neUSP Assay 97.5% ~ 100.5% Kusviba Kusachena Kwega: kwete kupfuura 1.0% Yese Kusviba: kwete anopfuura 2.0% Chaicho Kutenderera + 89 ° ~ + 93 ° Resi ...
Coenzyme Q10 inosanganisirwa sechinhu chemitochondria mukugadzirwa kwesimba kwemasero. Iyo inewo antioxidant maitiro, anoshandiswa zvakanyanya mu physiology, pharmacy, cosmetics uye hutano kudzivirira.Iye yero kana yakajeka yeyero kristaro hupfu, isina hwema, isina chinonaka, inogadzikana nyore nyore mu chloroform, benzene uye carbon tetrachloride; yakanyungudika muacetone, aether, petroleum ehter; kusungunuka zvishoma mu ethanol; insoluble mumvura kana methanol.It ichave yakaora kuita mutsvuku zvinhu muchiedza, stabl ...
Magnesium Ascorbyl Phosphate inogadzikana kwazvo vhitamini C zvigadzirwa (L-Ascorbic acid mono-dihydrogen phosphate magnesium munyu) iyo isingashatisi mumafomula ane mvura. ganda kujekesa uye kupenya, uye seye anti -inflammatory.Iye zvakare ine simba antioxidant.Iinoonekwa seyakanakisa isingatsamwise sakin kuchenesa mumiririri iyo inotitadzisa maseru eganda kuburitsa melanin uye mwenje ...
Sodium Ascorbyl Phosphate yakabva muvhitamini C, vhitamini C inoenderana nesainzi yazvino uye tekinoroji yekugadziriswa kwezvinhu zvakagadzirwa zvakagadzirwa pachishandiswa chigadzirwa ichi, kungave kwemuromo kana kunyura kuburikidza neganda mumuviri, kunogona kukurumidza kugayiwa ne phosphatase kusunungura vhitamini C, vhitamini C inotamba yakasarudzika yehupenyu uye biochemical mabasa. Vitamin C zvakare inokunda inononoka kune mwenje, kupisa uye simbi ions, nyore oxidized sh ...
Kojic Acid inozivikanwa se5- hydroxyl -2- hydroxymethyl -1 uye 4- piranone. Iyo isina simba acidic organic makemikari akagadzirwa nekuvirisa kwema microorganisms.Fine tramperic acid itsvuku kana yero tsono yakaita sekristaro; inonyungudika nyore mumvura, doro uye acetone, yakanyungudika zvishoma muether, ethyl acetate, chloroform uye pyridine, isingasviki mubenzene; ayo mamorekuru fomula ndeye C6H6O4, Molecular uremu142.1, Melting point153 ～ 156 ℃. Kiyi technical Parameter Kuonekwa Chena kana kubvisa chena kristaro Sezvo ...